Fanjavonana mampiahiahy any Paris: vehivavy Gasy iray tsy hita efa ho herinandro izao | NewsMada
Par Taratra sur 18/03/2019
Tao amin’ny gara Saint-Lazare, Paris, Frantsa, ny toerana nahitana ity vehivavy teratany malagasy iray, antsoina hoe Vavisoa Marie Ella, 46 taona, ity farany. Ny alahady 10 marsa lasa teo, izany hoe, efa ho herinandro izay, no nanjavonany ka miteraka ahiahy eo amin’ny fianakaviany. Ireto farany izay efa namoaka filazana fikarohana momba azy.
Mandeha ny fikarohana an’i Vavisoa Marie Ella, teratany malagasy, 46 taona, nanjavona tany Paris, nanomboka ny 10 marsa lasa teo. Navoaka tao amin’ny pejy ”facebook”, ”Recherches et ressources entraide” ny mombamomba azy, sy ny fikarohana azy. Voalaza fa mirefy 1,65 metatra i Marie, mahia ary nanao akanjo ambony mena sy fehintenda volondavenona. Manan-janaka roa antsoina hoe Amanda sy i Stanley izy, ary samy any Frantsa avokoa izy ireo. Tao anatin’izay herinandro izay, tsy nahenoana vaovao ity renim-pianakaviana malagasy ity. Tany amin’ny gara Saint-Lazare, Paris, ny nahitana azy farany, raha ny vaovao hita ao amin’ny pejy ”facebook”, ”Recherches et ressources entraide”.
Efa eo am-pelatanan’ny kaomisarian’ny polisy any Cergy Pontoise ny raharaha, ary efa manao ny fikarohana izy ireo. Tsy mbola nahitam-bokany aloha izany hatramin’ny omaly. Mampahatsiahy ny zava-nitranga nahazo an’i Andotiana, ilay tovovavy malagasy nanjavona efa ho iray volana ihany koa tany Frantsa, izay vao hita faty tanaty rano, ity fanjavonana. Manahy toe-javatra mitovitovy amin’izany ny olona mahafantatra an’i Marie. Voalaza fa tsy fanaony ny mandeha ka tsy miverina na tsy mampilaza ny olona akaiky azy, indrindra fa efa manan-janaka roa izy.
Tsy mpiseho any Frantsa
Amin’ny ankapobeny, tato ho ato vao nisy trangan-javatra tahaka izao, any Frantsa, indrindra fa ny mahazo ireo teratany malagasy. Tsy mpiseho any an-toerana ny toe-draharaha tahaka izao, izay mahatonga fanontaniana maro amin’ireo mpiray tanindrazana. Na ny fanadihadiana momba ny nahafaty an’i Andotiana aza, tsy mbola voavaly. Saingy, nisafidy ny hangina ny fianakaviany momba ny raharaha. Andrasana indray ny vokatry ny fikarohan’ny polisy frantsay momba ity farany, ary manan-jo hahalala ny marina ny rehetra rehefa vita ny fanadihadiana.